Ajụjụ - Jiangsu Senwei Eletrọniki Co., Ltd.
Ọrụ elekere 24
Ngalaba nnweta data
Onye na-etinye uche
Din okporo ụzọ eletriki eletriki eletrik
3Pha 4wire ike
3Pita 4wire ike (ic kaadi)
3Pita 4wire ike mita （remote）
Din okporo ụzọ otu na-agba ike mita
Single phase din okporo ụzọ ume elekere （ụlọ obibi）
Single phase din train power mit mit （ic kaadi)
Single frasi din okporo ụzọ ume elekere （remote （
Agbakwunyere igwe eletriki eletriiki elektrọniki arụmọrụ arụmọrụ
Ihe atọrọ atọ lcd agbakwunyere igwe eletriki eletriiki elektrọniki eletrik arụ ọrụ ọtụtụ-ọrụ na rs485
Nlegide anya ọnụ
Eletriki arụ ọrụ elele elele eletrik (gprs.lora)
Eletriki arụ ọrụ elele elele elele (ọwa 4)
Mita eletriki eletriki
Otu elekere elektrọn eletriki elele elektrọn eletriki eletrik
Otu usoro dị mfe elekere eletrik eletrik eletrik eletrik dị mfe
Igwe eletriki elektrọn elektrọniki arụ ọrụ atọ dị iche iche
Mgbazinye igwe eletriki eletrik eletrik
3Phaetịchara ike elele (kaadi ic)
Elekere eletriki eletrik eletrik elekere elekere （ic kaadi + modulu）
Single eletriki eletrik eletrik elekere （ic kaadi）
Single frasi ume mita （n'ime obodo + modul）
Single frasi ike mita （remote）
Mpempe elele na-agbazi tupu elekere card ic kaadi）
Single electronic ike mita
Usoro elekere eletriki elekere atọ
Igwe eletriki elekere eletriki atọ nke ụgbọ eletrik （ebu, lora, gprs）
Soket di ama
Ic kaadị ịkwụ ụgwọ mmiri mita mmiri icc
Mita mmiri dịpụrụ adịpụ Smart
AJ .J. AJREJ. AH.
A bụ onye nrụpụtara na mbupụ si China?
Ee, anyị bụ. Anyị bụ mpaghara OEM & ODM nke ime obodo, nwere ụlọ ọrụ nke anyị na Ngalaba Azụmaahịa International.
Ebee ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị dị?
Ulo oru anyi no na obodo Yixing, Jiangsu Province, China. Ọ na-ewe ihe dị ka 2hours site na ụgbọ elu ọsọ ọsọ si na ọdụ ụgbọ elu nke Shanghai ruo obodo anyị. A na-anabata gị nke ọma ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla.
Kedụ ka m ga-esi azụta ngwa ahịa gị?
Biko zitere anyị ajụjụ gị (nkọwapụta, eserese, ngwa) site na Alibaba, E-mail, Wechat anyị. Ọzọkwa ị nwere ike ịkpọ anyị ozugbo banyere ihe ị chọrọ, anyị ga-aza gị ASAP.
Ogologo oge ole ka ụzọ ndụ ya bụ?
Ọ na-ewe ihe dịka ụbọchị iri abụọ na ise ruo iri abụọ na ise mgbe enwetara nkwenye na ntinye ego Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ahịa a ngwa ngwa, biko gwa anyị, anyị ga - anwa ike anyị niile ibute gị ụzọ.
Kedụ ka m ga - esi nweta gị sample?
Ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa maka ụdị ịchọrọ, anyị nwere ike izitere gị sample maka n'efu. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ INWETA, a ga-akwụ ụgwọ maka nlele. Maka ụzọ abụọ a, ọ dị mkpa ka ị kwụọ ụgwọ ibu gị. Enwere ike izipu ihe nlele site na Fedex, UPS, TNT, DHL, ect.
Kedụ ka m ga-esi akwụ gị?
Maka ngwongwo mmepụta, ịkwesịrị ịkwụ ego 30% tupu imepụta ya na 70% itule n'elu mbupu. Commonzọ a na-ahụkarị bụ T / T tupu oge eruo. A na-anabatakwa ego site na L / C, DP na n'anya ka a na-ahụ maka ya.
Enwere m ike ịlele ezigbo ngwongwo tupu nnyefe m?
Eeh, a nabatara gị ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ gị, ma ọ bụ ndị ọzọ na-abịa n'ụlọ ọrụ anyị ka nyocha ahụ tupu nnyefe gị.
Kedu otu esi enyefe m ngwa ahịa m?
Maka obere ntakịrị, anyị na-adụ ọdụ ka ị nyefee ya site na onye ozi, dị ka Fedex, UPS, DHL, ect.
Maka oke buru ibu, anyị na-adụ ọdụ ka ị jiri ụgbọ mmiri na-ebufe ya. Anyị nwere ike izipu ngwaahịa na mbupu Mbupu gị (ụgwọ FOB). Ma ọ bụ na ịnweghị otu, anyị nwere ike ihota gị ọnụahịa CIF.
Nke 256, Xincheng Road, Huankeyuan, Yixing, Wuxi, Jiangsu, China
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị, biko hapụ ozi ịntanetị zitere anyị ozi kpọtụrụ anyị n’ime awa iri abụọ na anọ.